တူရငျနှားရိုငျးတှကေ ငှဖေျောစကျကွီး ဖွဈစရေမယျ – Play Maker Sports Journal
တနင်ျလာည အီတလီစီးရီးအေ. ပှဲစဉျ-၃၄ ပှဲကွိုသုံးသပျခကျြ
တိုရီနို နှငျ့ ပါးမား (ည ၁း၁၅)(မွနျမာပွညျဂုရု)
ရှုံးပှဲတှခေညျြးဆကျတိုကျရငျဆိုငျနရေတဲ့ပါးမားရဲ့အနအေထားကစိတျပကျြစရာပါ။တနျးတငျကနျြရဈဖို့ မဖွဈနိုငျတော့တဲ့ပါးမားအနနေဲ့ လကျကနျြပှဲတှကေို အနာခံကစားတော့မှာမဟုတျဘူး။နဂိုကတညျးကလညျးပါးမားဟာဘယျအသငျးနဲ့ပဲတှတှေ့ခေံ့စဈပိုငျးဂိုးအလှူပေးလှနျးပါတယျ။
တိုရီနိုကတော့ခံစဈယိုယှငျးပမေယျ့ဘီလော့တီဦးဆောငျတဲ့တိုကျစဈဂိုးသှငျးအားကောငျးတဲ့အသငျးပါ။တနျးတငျကနျြရဈဖို့ သခြောခငျြတယျဆိုရငျတိုရီနို အခုလိုပှဲမြိုးကို အနိုငျရအောငျကွိုးစားရပါလိမျ့မယျ။တဈဂိုးနိုငျရငျပဲခပျပါးပါးလေးရမယျ့တိုရီနိုကိုရှေးပါ။တူရငျနှားရိုငျးတှကေငှဖေျောစကျကွီး ဖွဈစရေမယျ။
တူရင်နွားရိုင်းတွေက ငွေဖော်စက်ကြီး ဖြစ်စေရမယ်
တနင်္လာည အီတလီစီးရီးအေ. ပွဲစဉ်-၃၄ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်
တိုရီနို နှင့် ပါးမား (ည ၁း၁၅)(မြန်မာပြည်ဂုရု)
ရှုံးပွဲတွေချည်း ဆက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပါးမားရဲ့အနေအထားက စိတ်ပျက်စရာပါ။တန်းတင်ကျန်ရစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ပါးမားအနေနဲ့ လက်ကျန်ပွဲတွေကို အနာခံကစားတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။နဂိုကတည်းကလည်း ပါးမားဟာ ဘယ်အသင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ ခံစစ်ပိုင်း ဂိုးအလှူ ပေးလွန်းပါတယ်။
တိုရီနိုကတော့ ခံစစ်ယိုယွင်းပေမယ့် ဘီလော့တီဦးဆောင်တဲ့တိုက်စစ် ဂိုးသွင်းအားကောင်းတဲ့အသင်းပါ။တန်းတင်ကျန်ရစ်ဖို့ သေချာချင်တယ်ဆိုရင် တိုရီနို အခုလိုပွဲမျိုးကို အနိုင်ရအောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။တစ်ဂိုးနိုင်ရင်ပဲ ခပ်ပါးပါးလေးရမယ့် တိုရီနိုကိုရွေးပါ။တူရင်နွားရိုင်းတွေက ငွေဖော်စက်ကြီး ဖြစ်စေရမယ်။